Ezigbo Atụmatụ Site na Ndị ọkachamara dị elu na nchapu saịtị
Taa, ọtụtụ weebụsaịtị nwere ọtụtụ data, ndị na-enyocha weebụ kwesịrị ịma ihe ụfọdụ iji chọpụta otú ị ga-esi mechachaa nke ọma. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji ntanetị weebụ iji nweta nnukwu ọnụ ọgụgụ nke data dị mkpa. Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime ibe weebụ nwere ihe nchebe, ọtụtụ ndị na-eme nchọgharị na-enye ụfọdụ ọrụ dị ukwuu maka ndị ọrụ - automark infiniti. Ndị na-esonụ bụ ụfọdụ ndụmọdụ dị mma maka ndị na-enyocha weebụ ndị chọrọ iwepụ data site na weebụsaịtị dị iche iche na ngwa ngwa.
Ihe kachasị mkpa maka scrapers web bụ ịchọta ngwaọrụ niile kwesịrị ekwesị ịmalite ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ. Dịka ọmụmaatụ, ha nwere ike ịmalite site na iji nchịkọta weebụ nke weebụ nwere ike inyere ha aka ịrụ ọrụ ahụ. N'ezie, enwere ọtụtụ ọrụ ịntanetị maka ọrụ a. Mgbe ha na-ekpochapụ weebụsaịtị, ha ga-echekwa data data ọ bụla ha budatara. N'ihi ya, ha nwere ike idebe otu ebe dị iche iche nke URL nke akwụkwọ ndị a na-awagharị. Dị ka ọmụmaatụ, ndị na-ahụ maka weebụ ga-ewu tebụl dị iche iche na nchekwa data ha iji chekwaa akwụkwọ edeturu..Karịsịa, web scrapers na-eme ka faịlụ dị iche iche chekwaa data ha niile na kọmputa ha, iji nyochaa ha mgbe e mesịrị.
Mepụta Spider iji wepu ọtụtụ weebụsaịtị
Udide bụ ihe omume pụrụ iche nke na-agagharị site na ibe weebụ iji chọta data kwesịrị ekwesị na-akpaghị aka. Ọ nwere ike ịchọta ọtụtụ ozi echekwara na ibe dị iche iche na Intanet. Site n'iwu ma na-edebe ududo (ma ọ bụ bot), ọ pụtara na ha nwere ike ibelata echiche weebụ dị iche iche. Ịntanetị bụ nnukwu ohere, ebe ha na-enweghị iji ya nanị iji gụọ isiokwu ma chọpụta ozi n'ozuzu na ntanetị mgbasa ozi ma ọ bụ ileta ụlọ ahịa. Kama nke ahụ, ha nwere ike iji ya mee ihe. Ọ bụ ebe buru ibu, ebe ha nwere ike iji mmemme dịgasị iche iche mee ihe ga-enyere ha aka inwe ọganihu ma mee ka ọrụ ha dịkwuo mma.
N'ezie, ududo nwere ike iṅomi ibe ma wepụ ma detuo data. N'ihi ya, ndị na-enyocha weebụ nwere ike iji usoro niile a na-enye nke nwere ike iji ọsọ na-agba ọsọ. Naanị ha ga-edozi ududo ahụ gaa ọsọ ọsọ. Dịka ọmụmaatụ, ha nwere ike ịmepụta ududo nke na-edebanye na saịtị ụfọdụ ma mee ihe dịka ndị ọrụ na-emekarị na-eme. Ọzọkwa, ududo nwere ike ịchọta data site na iji API ma ya mere ọ nwere ike ịrụ ọrụ dịgasị iche mgbe ejibanye na saịtị ndị ọzọ. Ndị na-enyocha weebụ ga-echeta na ududo ha na-atagharị ugbua aghaghị ịgbanwe ụkpụrụ ya ebe ha na-awagharị na weebụsaịtị dị iche iche.